UDI: Waxaan isku diyaarinay qoxooti dalkan nooga soo burqada. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub UDI: Waxaan isku diyaarinay qoxooti dalkan nooga soo burqada.
Hey´adda qoxootiga u qaabilsan dowlada Norway ee UDI-da ayaa sheegtay inay isku diyaarineyso qoxoot dalkan Norway uga soo burqada dalka Afgaanistaan, kadib markii ay dalkaas isaga baxeen ciidamada huwanta Nato, uuna ka qarxay dagaal u dhaxeeyo ciidanka ururka Taalibaan iyo kuwa dowlada taagta-daran ee Afgaanistaan.
Ururka Taalibaan ayaa mar horeba la wareegay gobolo iyo deegaamo badan oo katirsan dalka Afgaanistaan, waxaana qax uu ka bilowday gudaha dalkaas.
Hey´addaha qoxootiga Norway ee UDI-da ayaa sheegtay in ay isku diyaarineyso ku tala galka qoxooti badan oo uga imaada dalka Afgaanistaan, kaas oo magangalyo soo weydiisto Norway.
Norway ayaa maalmo kahor sidoo kale joojisay go´aanadii tarxiilka ee qoxootigii horey diidmada uga helay codsiga magangalyada.
Previous articleIsaga oo dalka ka maqan ayuu NAV Lacagta A.A.P ka qaadanayay: Maxkamad ayaa lasoo taagayaa
Next articleUSA bombet mål i Somalia